ဗန်ဒိုက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ ကွန်ပနီပြော – Sports A2Z
မန်ချက်စတာစီးတီးနောက်ခံလူဟောင်း ဗင်းဆင့် ကွန်ပနီက ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူဟာ တခြားကစားသမားတွေထက် လီဗာပူးနောက်ခံလူ ဗာဂျီးလ် ဗန်ဒိုက်လို့ပဲ မှတ်ယူရမှာဖြစ်ကြောင်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက ကစားသမားကိုပဲ ရွေးချယ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
? @VincentKompany REVEALS his choice for best ever @PremierLeague centre back. pic.twitter.com/QWITtHcVlt
— S P O R F (At ?) (@Sporf) May 9, 2020
ပရီးမီးယားလိဂ်ကို မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့အတူ နောက်ဆုံးနှစ်ကြိမ်ဆက် အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူက ဗန်ဒိုက်ဟာ ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေမှာ အဓိကကျခဲ့ကြောင်းနဲ့ ဒါကြောင့်ပဲ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောချင်တာဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား၊ ယူအီးအက်ဖ်အေဆူပါဖလားနဲ့ ကမ္ဘာ့ကလပ်ချန်ပီယံဖလားတွေကို ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဗန်ဒိုက်ဟာ တစ်ဦးချင်းဆုအဖြစ်လည်း ယူအီးအက်ဖ်အေအကောင်းဆုံးဆု၊ နောက်ခံလူဆု၊ ပရီးမီးယားလိဂ်အကောင်းဆုံးဆုနဲ့ ပီအက်ဖ်အေအကောင်းဆုံးဆုတွေကို ရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။
“လီဗာပူးလ်က ဗန်ဒိုက်မရှိခင်နဲ့ သူရောက်လာပြီးမှက အရမ်းကို ကွာခြားလွန်းနေခဲ့တာဟာ သက်သေတစ်ခုပါပဲ။ ရီယို ဖာဒီနန်နဲ့ ဂျွန်တယ်ရီတို့ထက် ဗန်ဒိုက်ရဲ့ အသင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုက ပိုမိုကြီးမားပါတယ်။ ခံစစ်ကစားသမားကောင်းဆိုတာ သူတစ်ဦးတည်း ကောင်းနေဖို့ထက် တခြားကစားသမားတွေကိုပါ စုစည်းပြီး ကျစ်လျစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှ တကယ့်ကစားသမားကောင်းပါ”လို့ ကွန်ပနီက ဆိုပါတယ်။
ကွန်ပနီရဲ့ စကားကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီး ဆုဖလား ၁၇ ခု ရယူခဲ့တဲ့ ဂျွန်တယ်ရီနဲ့ ၁၈ ခု ရယူခဲ့တဲ့ ရီယို ဖာဒီနန်တို့ရဲ့ ချဲလ်ဆီးနဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ရယ်စရာလည်းဖြစ်နေခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ လီဗာပူးလ်နဲ့ အောင်မြင်မှုတချို့ ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဗန်ဒိုက်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာကတော့ အငြင်းပွားစရာလည်းဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
UNICODE: မနျခကျြစတာစီးတီးနောကျခံလူဟောငျး ဗငျးဆငျ့ ကှနျပနီက ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ အကောငျးဆုံးနောကျခံလူဟာ တခွားကစားသမားတှထေကျ လီဗာပူးနောကျခံလူ ဗာဂြီးလျ ဗနျဒိုကျလို့ပဲ မှတျယူရမှာဖွဈကွောငျး အိမျနီးခငျြးနိုငျငံက ကစားသမားကိုပဲ ရှေးခယျြပွောကွားလိုကျပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျကို မနျခကျြစတာစီးတီးအသငျးနဲ့အတူ နောကျဆုံးနှဈကွိမျဆကျ အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ ရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ နောကျခံလူက ဗနျဒိုကျဟာ ဒီနောကျပိုငျးနှဈတှမှော လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ အောငျမွငျမှုတှမှော အဓိကကခြဲ့ကွောငျးနဲ့ ဒါကွောငျ့ပဲ အကောငျးဆုံးလို့ ပွောခငျြတာဖွဈကွောငျးလညျး ဆိုပါတယျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျး ခနျြပီယံလိဂျဖလား၊ ယူအီးအကျဖျအဆေူပါဖလားနဲ့ ကမ်ဘာ့ကလပျခနျြပီယံဖလားတှကေို ရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ ဗနျဒိုကျဟာ တဈဦးခငျြးဆုအဖွဈလညျး ယူအီးအကျဖျအအေကောငျးဆုံးဆု၊ နောကျခံလူဆု၊ ပရီးမီးယားလိဂျအကောငျးဆုံးဆုနဲ့ ပီအကျဖျအအေကောငျးဆုံးဆုတှကေို ရယူနိုငျခဲ့တာပါ။
“လီဗာပူးလျက ဗနျဒိုကျမရှိခငျနဲ့ သူရောကျလာပွီးမှက အရမျးကို ကှာခွားလှနျးနခေဲ့တာဟာ သကျသတေဈခုပါပဲ။ ရီယို ဖာဒီနနျနဲ့ ဂြှနျတယျရီတို့ထကျ ဗနျဒိုကျရဲ့ အသငျးအပျေါ သကျရောကျမှုက ပိုမိုကွီးမားပါတယျ။ ခံစဈကစားသမားကောငျးဆိုတာ သူတဈဦးတညျး ကောငျးနဖေို့ထကျ တခွားကစားသမားတှကေိုပါ စုစညျးပွီး ကဈြလဈြအောငျလုပျပေးနိုငျမှ တကယျ့ကစားသမားကောငျးပါ”လို့ ကှနျပနီက ဆိုပါတယျ။
ကှနျပနီရဲ့ စကားကတော့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ ကငျြလညျခဲ့ပွီး ဆုဖလား ၁၇ ခု ရယူခဲ့တဲ့ ဂြှနျတယျရီနဲ့ ၁၈ ခု ရယူခဲ့တဲ့ ရီယို ဖာဒီနနျတို့ရဲ့ ခြဲလျဆီးနဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျတို့ရဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျတော့ ရယျစရာလညျးဖွဈနခေဲ့ပွီး နောကျပိုငျးနှဈအနညျးငယျအတှငျးမှာ လီဗာပူးလျနဲ့ အောငျမွငျမှုတခြို့ ရယူနိုငျခဲ့တဲ့ ဗနျဒိုကျကို ရှေးခယျြခဲ့တာကတော့ အငွငျးပှားစရာလညျးဖွဈခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။